Igumbi lakho lokulala e indlu enevaranda sinombuki zindwendwe onguKarma
Uya kuyithanda indawo yam ngenxa ye-ambiance, indawo yangaphandle, kunye nebhedi epholileyo. Indawo yam ilungile kwabatshatileyo, abahambi bebodwa, kunye neentsapho (kunye nabantwana).
Ipropathi inomhlaba wayo weehektare ezi-3 kunye negadi yabucala.
I-Aritar ikwiSilk Route, yaziwa ngobuhle bayo bendalo kunye nobuhle belizwe. Ikwayeyona ndawo ilungileyo yokuhlala xa ufuna ukutyelela iOld Silk Route, Zuluk, Kupup, Nathang. Ungafikelela naseGangtok ngeSilk Route ngeNathula kunye neChangu Lake.
Sinosuku olunye umsebenzi Aritar. Ekuseni kusasa ukuphuma kwelanga, ukuhamba ngesikhephe echibini kunye nondwendwelo lweemonki. ukuba unexesha ungahamba usuku olunye uhambo / uhambo oluya eMulkharka Lake.
Ndinomntu okhathalayo oqeqeshwe kakuhle, ngalo lonke ixesha ndikho ndiyakuvuyela ukundinceda kwaye ndenze ukuhlala kukhumbuleke ngakumbi